by MM Book City · Published June 15, 2018
Ratan Tata ၏ ပြောစကားများ
ဘဝမှာ အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျတွေက ရှေ့ကိုဆက်ဖို့အတွက် သိပ်ကို အရေးပါလွန်းတယ်။ ECG wave တွေလိုပဲပေါ့။ Wave တွေ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် အသက်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ _______________ သံထည်တွေကို ဘယ်သူကမှ မဖျက်ဆီးနိုင်ဘူး။ သူ့ သံချေးတွေကသာ သူ့ကို ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်။ အလားတူပဲ။ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်သူကမှ မဖျက်ဆီးနိုင်ဘူး။ သူ့အတွေးတွေကသာ သူ့ကိုဖျက်ဆီးတယ်။ _______________ လူတိုင်းမှာ တူညီတဲ့အရည်အသွေးတွေ မရှိပေမယ့် ကိုယ်စီအရည်အသွေးတွေကို အသုံးချပြီး တက်လှမ်းဖို့အတွက်တော့...
တစ်အိမ်လုံးမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိကြောင်းကို ပြားကစ၍ အတိအကျသိရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိပြီဖြစ်၏။ ကလေးတွေကို သူတို့အမေက မုန့်ဖိုး တစ်ယောက်တစ်မတ်စီ ပေးသည်။ ခါတိုင်း သုံးဆယ့်ငါးပြား ပေးနေကျ ဖြစ်သဖြင့် ကလေးတွေက မကျေနပ်ကြ။ ဘာမျှတော့ မပြောချေ။ ပြောလို့လည်း ဘာမှမထူး၊ ပိုရမည်မဟုတ်မှန်း သိသောကြောင့် လေကုန်ခံပြီး မပြောကြခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့တည်းမဟုတ် သူတို့အမေ စိတ်ထွက်ပြီး ခေါင်းခေါက်မည် စိုးသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မည်။ အငယ်ဆုံးကောင်ကတော့...
by MM Book City · Published June 14, 2018
– စာကိုမကျက်ပါနဲ့သား . စာကိုနားလည်အောင် ဖတ်ပါ မှတ်ပါ -လိုချင်တာတွေကို မဝယ်ပဲ ပိုက်ဆံကို ခြစ်ကုပ်စုပီး ကပ်စေးမနဲပါနဲ့သား . ဒါပေမဲ့ အသုံးနဲ့ အဖြုန်းက်ို ခွဲခြားတတ်ပါစေ -ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ အတင်းအဖျင်းတွေကို ဂရုမစိုက်ပါနဲ့သား . သားအကြောင်းကို သားကိုယ်တိုင်ထက်ပိုပီး ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါ -စာများများဖတ်ပါ သား .reader ကောင်းတစ်ယောက်ပာာ leader ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ -စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုပဲ ရွေးလုပ်ပါ...
by MM Book City · Published June 13, 2018 · Last modified June 14, 2018
“ထိထိရောက်ရောက် လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့ အကြံပြုချက် ၃ ချက် “
ကျွန်ုပ်တို့ ကျောင်းကပေးတဲ့ ဘွဲ့တွေရချင်ရခဲ့ကြမယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲမပြတ် ဆက်လက်သင်ယူ လေ့လာနေရပါတယ်။ အလုပ်သစ်၊ နေရာသစ်၊ အပေါင်းအသင်းသစ် စတဲ့ အသစ်သော ပတ်ဝန်းကျင်များမှာ သင်ယူလေ့လာစရာအသစ် အသစ်တွေ ထပ်ထပ်ပြီး ပေါ်နေပါတယ်။ လေ့လာမှုကို ရပ်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တိုးတက်မှုများလည်း ရပ်တန့်သွားမှာပါ။ Nate Kornell လို့ခေါ်တဲ့ Williams College မှ သိမြင်မှုစိတ်ပညာရှင် တွဲဖက်ပါမောက္ခကြီးက လေ့လာသင်ယူခြင်းဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အများစုက မကောင်းတဲ့...
by MM Book City · Published June 13, 2018
သူဟာ Multimixer သစ်သီးဖျော်စက် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်လုပ်နေတုံးမှာ San Bernardino မြို့မှာရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တခုကနေ သူ့ဆီကို ဖျော်စက် ၈ လုံး လှမ်းမှာလိုက်တယ်။ ဖျော်စက်ဝယ်သူ အရမ်းနဲနေတဲ့အချိန်မှာ စက် ၈ လုံးတောင် မှာတယ်ဆိုတော့ ထူးဆန်းလွန်းလို့ သူဟာ အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းချင်လို့ အဲဒီမြို့လေးကို သွားလိုက်တယ်။ ဟိုရောက်တော့ သူ့ဆီက စက်တွေကို ဝယ်သူဟာ Dick McDonald နဲ့ Mac McDonald...
အချိန်ဖြုန်းတယ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးရင် တီဗီကြည့်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်ကြည့်တာတွေလို့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ ရုတ်တရက်တော့ အဲဒီအဖြေဟာ မှန်တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာပေးအစီအစဉ်တစ်ခုကို တီဗီကနေ ကြည့်တာ၊ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပေးမယ့်၊ သင်ခန်းစာပေးမယ့် ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားကို ကြည့်တာ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အလုပ်အကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်း ဆွေးနွေးတာ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ အကျိုးရှိမယ့် စာလေးတွေ ဖတ်တာတွေကို အချိန်ဖြုန်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပါ့မလား။ ပြောလို့...
by MM Book City · Published June 12, 2018
ခဲတံအရည်အချင်း ၅ မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ပါ
(အောင်မြင်စေဖို့) အရည်အချင်း(၁) စာရေးဖို့ ခဲတံကို လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ရေးရတယ်။ သင့်ဘဝမှာ သင့်ကို နည်းပေးလမ်းပြတဲ့ ဆရာသမားကောင်း လိုတယ်။ အရည်အချင်း(၂) ခဲတံကို မကြာခဏ ချွန်ပေးရတယ်။ အဲဒီလို ချွန်ပေးရတဲ့အတွက် ခဲတံဟာ နာကျင်ပေမယ့် ခဲဆံချွန်လာတယ်။ သင့်ဘဝမှာ အနာခံ လေ့ကျင့်ပေးမှ အရည်အချင်းတက်လာမယ်။ လူတော်ဖြစ်လာမယ်။ အရည်အချင်း(၃) ခဲတံမှာ မှားတဲ့ စာကို ဖျက်ဖို့ ခဲဖျက်ပါတယ်။ အမှားလုပ်မိရင် ပြင်ပါ။ အမှားကနေ...
“ဗီဇ ဆိုတာ.. ဖျောက်ရ ခက်တယ်”
(သင့်အတွက် သတိထားဆင်ခြင်စရာ ) ကင်းမြီးကောက်တကောင်ဟာ သူနေတဲ့ကျွန်းကလေး တခုကနေ မြစ်တဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့နောက်ကျွန်းတခုကို သွားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ကင်းမြီးကောက်ဟာရေမကူး တတ်လို့ မြစ်ကိုဖြတ်ဖို့ရာ အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။ မြစ်ကမ်းဘေးမှာလျှေက်သွားရင်း ဒီမြစ်ကိုဘယ်လိုကူး ရ ပါ့လို့…အကြံထုတ်နေတုန်း…ရုတ်တရက် မြစ်ရေစပ်မှာ စိမ်နေတဲ့ ဖားတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်လို့ သွားစကား ပြောတယ်။ “ကိုရွှေဖါးရေ ကျနော့်ကို ခင်ဗျားရဲ့ကျောပေါ်တင်ပြီး ဟိုဖက်ကမ်းကိုပို့ပေးပါလား။ ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဗျာ” “ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲ မင်းကိုကျောပိုးသွားရင်းနဲ့ ငါ့ကို မင်းရဲ့အဆိပ်ရှိတဲ့အစွယ်နဲ့ထိုးလိုက်ရင် ငါရေနစ် သေသွားမှာပေါ့ ” ကင်းမြီးကောက်၊…...
by MM Book City · Published June 7, 2018
အစာစားပြီး ချက်ချင်းအိပ်ခြင်းဟာ အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ကျန်းမာစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေ စားသုံးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကြိုးစားသလောက်တော့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို အများဆုံး အဆုံးစွန် ပမာဏအထိ ရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင်နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေက အစာချေဖျက်ခြင်းကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမှား တစ်ခုကတော့ သင်စားပြီးပြီးချင်း လဲလျောင်းတာပါပဲ။ အစာစားပြီး လဲလျောင်းခြင်းဟာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစေပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်စားလိုက်တဲ့အစာတွေကို သင်မတ်မတ် ထိုင်နေမှသာ ကောင်းစွာခြေဖျက်နိုင်ပါတယ်။...
by MM Book City · Published June 6, 2018
တစ်ခါတုန်းက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တောကြီးမျက်မည်းထဲမှာ လှည့်လည်သွားလာနေတုန်း ဗြုန်းဆို ခပ်လှမ်းလှမ်း လာနေတဲ့ ၀က်ဝံကြီးတစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရသတဲ့။ တစ်ယောက်ဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို ၀ုန်းကနဲထွက်ပြေးသွားပြီး နီးစပ်ရာအပင်ပေါ်ကို တွယ်တက်သွားတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ၀က်ဝံကြီးလာရာ လမ်းကြောင်းတည့်တည့်မှာ ထီးတည်းကြီး ကျန်နေခဲ့တာပေါ့။ကြံရာမရတဲ့အဆုံး သူဟာ မြေကြီးပေါ် လှဲချလိုက်ပြီး အသေကောင်လို ဟန်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ ၀က်ဝံကြီးဟာ သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်လာပြီး လမ်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့ သူ့အနား ရောက်လာတဲ့အခါ ရပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ သူ့ရဲ့မျက်နှာနားကပ်ပြီး အနံ့ခံလိုက်သတဲ့။အောက်ကလူကတော့...